[Faallo] Badqabka Shaqaalaha caafimaadku waa furaha gurmad mirodhala! | Somali Health
Home Faallooyin Badqabka Shaqaalaha caafimaadku waa furaha gurmad mirodhala!
[Faallo] Badqabka Shaqaalaha caafimaadku waa furaha gurmad mirodhala!
Dhammaadka bishii Janaayo, Hey’adda caafimaadka adduunka (WHO) ayaa ku dhawaaqday in cudurka COVID19 uu caalamka ku yahay caqabad caafimaad loona baahan yahay in si degdeg ah loo wajaho. Muddo bil kadib, waxay ku dhawaaqday in cudurka coronavirus yahay safmar kuna baahay dunnida oo dhan.
Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka nidaamkoodaa caafimaad liito, awoodne uma lahan ka hortaga iyo xakmeynta cudurada safmarka. Sidaas darted, wasaaradda caafimaadka Soomaaliya waxaa si weyn u maalgaliya dalalka reer galbeedka iyo shaqsiyaad deeq-bixiyeyaal ah.
Toddobaadkii hore, dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa deeq caafimaad ah ka heshay maalqabeenka Jack Ma iyo Alibaba Foundations, deeqdaas oo iskugu jirtay; 20,000 baaritaaanka cudurka COVID19, 50,000 Afgagashi nooca N95 (Mask) iyo 1000 qalabka difaaca caafimaad.
Somali government received Jack Ma & Alibaba Foundations COVID-19 consignment of masks, test kits, PPEs and face shields at Aden Abdulle International Airport, Mogadishu. Delivered by Ethiopian Airlines cargo flight. pic.twitter.com/qL2JWbGEag
— Ministry of Health- Somalia (@MoH_Somalia) March 24, 2020
Afkashiga N95 (Mask) oo si khalan loo isticmaalay.
Afgashiga waa labo (2) nooc mid; nooca qaliimada loo xirto (surgical face mask) iyo midka loo xirto cudurada kula gudbo neefta (N95 respirator). Afgashiga nooca qaliimada qof caafimaad qaba uma baahna in uu xirto, qofka kaliya u baahan waa qofka la xannuunsan cudurka (Qandho, qufaca ama hindhisid leh) si dadka hareerihiisa jooga uga illaaliyo qoyaanka yaryar ka imaanayo markuu qufac ama hindhiso. Afgashiga nooca N95 (N95 respirator) waxaa badanaa loo isticmaalaa Cisbitaalada gaar ahaan qeybaha cudurada faafa kaliya iyo shaqaalaha halista ugu jiro cudurkadaas
Afkashiga nooca qaliimada loo xirto (surgical face mask) iyo midka loo xirto cudurada kula gudbo neefta (N95 respirator)
Haddaba, Hey’adda caafimaadka adduunka (WHO) iyo Xarunta ka hortaga cudurada faafa ee Mareekanka (CDC) kuma talin in dadweynaha ay xirtan labada nooc si ay naftooda uga ilaalliyaan cudurada lagu kala qaado dhibacaha qoyan, uu ku jiro cudurka COVID19.
Nasiib darro, dowladda federaalka Sooomaaliya si aan munaasib aheyn ayey u istcimaashay Afkashiga nooca N95 (N95 respirator) halka xarumaha caafimaadka aan loo daabulin Afkagashi iyo qalabka difaaca caafimaad.
Saciid Dani, Madaxweynaha maamulka Puntland iyo Ahmed karaashe, M/K/Xigeenkiisa, ayaa ayagoo xiran Afgashiga nooca N95 ka soo dhex muuqday shir ay la lahaayeen guddiga ka hortaga cudurka COVID19 ee Puntland. Sidaa si la mid, Basma Caamir, G/K/Xigeenka arrimaha bulshada gobalka Benaadir ayaa ayadoo xiran Afgashiga nooca N95 ka soo muqatay kulan ey la laheyd guddiga heer gobol ee maamulka gobolka Benaadir u qaabilsan cudurka COVID19. Dhammaan madaxda kulankaas ka qeybgashay ayaa ayagane xirnaa.
Dhinaca kale, Khadiijo Diiriye, W/Wasaaradda cayaraaha, Maxamed Xayir, W/Wasaaradda Warfaafinta iyo Duqa magaallada Hargeysa, ayaa kasoo kala muuqday munaasbyo kala duwan ayagoo xiran Afgashiga nooca N95.
Saameynta ku imaan karta shaqaalaha caafimaad….
Dalalka reer galbeedka waxaa gabaabsi ku ah Afgashiga (mask) iyo guud ahaan qalabka difaaca caafimaad ey xirtaan shaqaalaha caafimaad, halka dalalka dunnida seddexaad ey la’a yihiin raadinaayaan deeq. Sababta keentay baahidaas baahsan kaliya ma aha tirada bukaannada oo korortay, laakiin sidoo kale waxaa badan isticmaalka bulshada Afgashiga, kadib macluumaad khaldan laga baahiyay.
Dalka Talyaaniga, dadka u dhintay cudurka COVID19 8% boqolkii waa shaqaale caafimaad, sida lagu xusay daraasad lagu qoray Joornaalka New England Medical Journal halka 61 dhakhaatiir ey u dhinteen cudurka. Dalka Shiinaha, qiyaastii 3000 shaqaale caafimaad ah ayuu cudurka ku dhacay.
Sida uu qoray wargeyska New York Times, dalka Spain 12,000 shaqaale caafimaad ayuu cudurka ku dhacay oo dhiganta 14% boqolkii wadarta guud dadka uu ku dhacay. Dalka Hindiya, dhakhaatiirta waxay isticmalayaan dharka roobka iyo koofiyadaha mootada si ey u la dagalamaan cudurka.
Shaqaalaha Spain oo xiran bacda qashina si naftooda uga badbaadiyaan Viruska
Indian doctors fight coronavirus with raincoats, helmets amid lack of equipment https://t.co/SYwvkpaUCR by @DevjyotGhoshal and @AdityaKalra pic.twitter.com/dcvrKXvOMf
— Reuters India (@ReutersIndia) March 31, 2020
Si kasba ahaatee, Soomaliya haddii la waayo Afgashiga iyo guud ahaan qalabka difaaca caafimaad waxa dhici kara in cudurka ku dhaco shaqaalaha caafimaad iyo qoyskooda ama ey u dhintaan. Arrintaas oo saameyn ku yeelaneysa daryeelka caafimaad ee dalka, ugu dambeyn sababi karta dhimasho badan.
Waa in dowaldad cadaadis la saaraa….
Marka lagu guda jiro xakameynta cudurada safmarka, shaqaalaha caafimaadka ayaa ah illaha ugu qaalisan. Sidaas darteed, Ururada caafimaad dunnida ayaa dalalkooda culeys ku saaray in shaqalaaha caafimaad hellaan agab, baaritaan iyo daryeel caafimaad.
Sidaas si la mid ah Ururka Dhakhaatiirta Soomaaliyeed layaa aga rabaa in ey cadaadis ku saareen dowladda dhaxe iyo maamul gobaleedyada in isbitaalada la gaarsiiyo Afgashiga (mask) iyo guud ahaan qalabka difaaca caafimaad.
Ugu dambeyn, Shacabka waa in fariin xoog leh gaarsiiyaan siyaasi kasta – oo ah in shaqaalaha caafimaad helaan agab, baaritaan iyo daryeel caafimaad waayo difaaaca kaliya aan heysano kaasoo ku waajahan cudurka COVID19.
Previous articleDaawada Zantac oo laga saaray qaanadaha suuqyada dawada Mareekanka
Next articleSoomaaliya: Bukaankii kowaad ayaa ka soo kabsaday cudurka COVID19